Xassan Fiyooke: “Farmaajo Waxaa Micno U Sameyn Lahaa Haddii Uu Ka Degi Lahaa Hargeysa” (Dhageyso) – Shabakadda Amiirnuur
Xassan Fiyooke: “Farmaajo Waxaa Micno U Sameyn Lahaa Haddii Uu Ka Degi Lahaa Hargeysa” (Dhageyso)
January 10, 2018 8:20 am by admin Views: 63
Aqoonyahan Xassan FIyooke Cali oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in socdaalkii madaxweyne Farmaajo ee magaalada Garowe aanu ahayn mid micno sidaa u buuran sameynaya.
Wuxuu sheegay in uu Garowe horey u booqday islamarkaana aanu jirin farqi weyn oo u dhaxeeya isaga iyo Gaas marka laga reebo arrimaha carabta ee ay isku khilaafsan yihiin, laakin arrinta muhimka ah ay ahayd inuu booqdo magaalada Hargeysa oo ah caasimadda labaad ee Soomaaliya.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in booqashadaas ay micno weyn u sameyn lahayd laakin middan Garowe ay iska tahay uun hab dhaqankii iyo shaqa maalmeedkii madaxda dowladda lagu yaqiinay.
Sidoo kale aqoonyahanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay in safiirka Itoobiya ee Garowe uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee madaxweynaha kusoo dhaweeyay magaalada Garowe.
Halkan Ka Degso Wareysiga Aqoonyahan Xassan Fiyooke